War-Degdega:Rabshad Gacan ka hadal ah ayaa saaka ka bilaabantay Degmadda Axmed Dhagax ee Magaalada Hargaysa. | WWW.SOMALILAND.NO
War-Degdega:Rabshad Gacan ka hadal ah ayaa saaka ka bilaabantay Degmadda Axmed Dhagax ee Magaalada Hargaysa.
Hargaysa(sl.no) – Dadweynaha degan xaafada Axmed Dhagax ee (Ex-Dunbuluq) ayaa saaka iyagoo gadoodsan mudaharaad ka bilaabay xaafadaasi, waxaanay xidheen wadooyinka xaafadaas gala oo dhan.
Dhalinyaro, dumar iyo dad waaweyn oo saaka isku soo baxay ayaa weeraray Ciidamada Booliska ee Saldhiga Iftiin waxaanay qaarka mida ka qaadeen qoryihii sidoo kale waxay jajabiyeen gaadiidkii dawlada ee wadooyinka marayey oo dhan.
Gadoodka dadwaynaha xaafadaasi sameeyeen waxay ka dhalatay sida ay noo sheegeen dadkii mudaharaadayey qaarkood inay xaafadu ka cadhootay xaafad ka tirsan degmada Axmed Dhaqax ooh ore loo odhan jiray Cabdi Iidan oo ay dhawaan Maamulka Golaha Deegaanka Hargaysi u magacaabeen Degmo cusub isla markaana ay Magacii hore ka bedeleen oo ay u bixiyeen Sh.Cumar Yuusuf.
Mudaharaadka gacan ka hadalka ah ee xaafadaasi ilaa hada ka socdaa waa mid xoogan oo aanay xaafadu u kala hadhin, dawladda iyo ciidamada Booliskuna fooda way galin kari la’yihiin waxaana xidhan Meheradihii iyo goobihii adeega bulshada marka laga bilaabo Garoonka Kubada Cagta (Hargaysa Stadium) ilaa iyo jidka Total.
« Wasiiradii Riyaale u xushay wada hadalada oo xalay gudoomiye Cirro u cadeeyay mowqifka rasmiga ah ee xukuumada SALAADIINTA BEESHA ARAB OO KA HADLAY DHACDADII KA DHACDAY HARGEYSA »